Amaphutha ezemfundo ngokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyinto ethinta iplanethi yonke ngandlela thile, enamandla noma ebuthakathaka, kepha imiphumela yayo ibonakala kaningi nsuku zonke.
Kodwa-ke, iningi labagxeki abakholelwa ekuguqukeni kwesimo sezulu abanayo imibono yesayensi yokuhlambalaza le nto. Baphika nje ukuthi kukhona ushintsho ku isimo sezulu somhlaba wonke ngenxa yokungazi, ukwesaba ukwamukela iqiniso, ukungabi nandaba, ukunganaki, ubuwula noma ukudideka. Kungani abantu bephika ukuthi kukhona ukuguquka kwesimo sezulu kanti imiphumela yaso isobala kangaka?
1 Ukuphika ukuguquguquka kwesimo sezulu
2 Amaphutha ekudlulisweni kwesimo sezulu
3 Musa ukudala i-alarmism
Ukuphika ukuguquguquka kwesimo sezulu
Ngokwenhlolovo eyenziwe ngu IPew Research Center ngo-2016, Abantu abadala abangama-31% e-United States abakholelwa ukuthi umuntu ubangela ukuguquka kwesimo sezulu kanti u-20% ukholelwa ukuthi abukho ngisho nobufakazi obanele bokufakazela ukuba khona kwalesi simo. Kwenzeka okufanayo kuwo wonke amazwe omhlaba.
Kodwa-ke, namuhla kungabonakala ukuthi, unyaka nonyaka, imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ikhuliswa kanjani. Imiphumela efana nokuqina nobude besomiso ngenxa yokwehla kwemvula, ukwanda kweziphepho ezishisayo kanye neziphepho kanye nokugqame kakhulu emhlabeni jikelele: ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi nendawo.
Kunabantu abacela ukuhlonishwa ngemibono yabo lapho bephika ukuthi kukhona ushintsho esimweni sezulu somhlaba. Kodwa-ke, lokhu kubonakala kungaqondakali, lapho i-97% yomphakathi wesayensi emhlabeni jikelele kuqinisekisa ukuthi ithonya lemisebenzi yabantu lithinta amandla wohlelo lwesimo sezulu kuzo zonke izindawo zomhlaba.
Ukuguquka kwesimo sezulu akuthinti zonke izifunda ngokulinganayo, kepha kuthinta wonke umuntu. Kuyiqiniso ukuthi lokhu kubangelwa izinkinga ekuboneni komphakathi kwezinkinga zemvelo. Izinkinga zemvelo zizwakala nsuku zonke ezindabeni ezindaweni mhlawumbe ezikude nombukeli. Ngalesi sizathu, umbono wenkinga yezemvelo awuthinti ngendlela eqonde ngqo nonembeza babantu ngokungathinti inkinga ngqo.
Kunzima ukuvuma ukuthi impilo njengoba siyazi namuhla eMhlabeni ingashintsha ngokuphelele esikhathini esingamashumi eminyaka. Ukuguquka kwesimo sezulu kuyinto eyinkimbinkimbi kakhulu futhi ekusakazweni kwayo sigcina senza amaphutha. Kubantu asebekhulile abanendlela yokuphila egxilile, akunakwenzeka noma ubuqhawe ukucabanga ukuthi ungabenza bakholelwe ebukhoneni bokuguquka kwesimo sezulu emhlabeni jikelele.
Amaphutha ekudlulisweni kwesimo sezulu
Lapho sizama ukuqwashisa ngokuguquka kwesimo sezulu kunezinkinga eziningana esibhekana nazo futhi esivame ukwenza amaphutha kuzo. Into yokuqala ukuthi sisebenzisa ulimi oluyinkimbinkimbi noluyinkimbinkimbi, kwesinye isikhathi lubethelwe kangangoba luyazikhethela. Imigomo efana ukunciphisa, ukujwayela, ukuqina, i-acidification, umphumela wokushisa okushisa, isikhutha, njll. Zisetshenziswa ososayensi nabezemvelo ngokwemvelo. Kodwa-ke, ngaphandle kwale niche, ababaningi abantu abakuqondayo ukuthi kuyini. Siphinde sisebenzise ama-akhronimi amaningi esilulumagama sethu okuthi, kwesinye isikhathi, sikuthola kunzima ukuphimisela. Amagama afana ne-IPCC, UNFCCC, COP.
Ezinye izibalo kuthi ngathi zibukeka zinemibandela, kwabanye abantu azisho lutho. Isibonelo, inani lokuma le- ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba ngama-2 degrees, siyazi ukuthi kungumkhawulo izinguquko emhlabeni ezingaba nokuhlehliseka futhi ezingalindelekile. Kodwa-ke, kubantu abaningi lokhu akubonisi lutho.
Sivame ukuchaza ukuthi, ngokwanda kwamazinga okushisa, ama-moor azonyamalala, amanzi okuphuza emhlabeni azoncipha, amakhemikhali asezindaweni ezibandayo ancibilike futhi ulwandle lukhuphuke, njll. Kwabaningi, ukwanda kwama-2 degrees emazingeni okushisa kungasho kuphela ushintsho lwekhabethe.
Musa ukudala i-alarmism
Lapho uqwashisa ngokushintsha kwesimo sezulu kubalulekile ukuthi ungaweli emilayezo ye-alamu. Imilayezo ebikezela ukuphela komhlaba noma i-apocalypse, ngoba ayinampumelelo. Umngeneli angacabanga ukuthi uma singenalutho esisele okufanele sikwenze ukukulungisa, khona-ke kuzofanele sijabulele kuphela ngenkathi okuhle kuhlala.
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyinto esivele yenzekile futhi idlulisa futhi iqwashisa ngayo kubaluleke kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Amaphutha ezemfundo ngokushintsha kwesimo sezulu
I-athikili ibaluleke kakhulu futhi ifike ngesikhathi, ngoba isho kahle kakhulu, kaningi siyakhohlwa ukuthi ezikhathini eziningi sikhuluma nomphakathi onamandla, okungukuthi, ofundile, ofundile ngokulingene futhi onezinga eliphansi lemfundo, futhi ngenxa yalesi sizathu, Kufanele sizikhulume ngolimi oluzwisisekayo, ikakhulukazi uma sizikhulumela ngokwethu ngokusebenzisa abezindaba, kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi imikhakha ethakazelayo engachazwanga ngendlela eqondakalayo, lapho kubhekene neqiniso elenzeka njalo, ngoba Ngiphinde ngasho nokuthi umhlaba uyisidalwa esinamandla (uhamba ngokunyakaziswa unomphela), ukudala izimo zokuphila ezingcono, kepha njengoba sikushaye indiva lokhu, lezo zinguquko zemvelo, lapho umuntu ephule ibhalansi, ziba yinhlekelele, ngokuba yingozi kakhulu labo abanemithombo elinganiselwe, okuyibo abaningi. Ngakho-ke, i-UNESCO incoma "IMFUNDO EYISIKHATHI ESISEMGANGALWENI NANGOKUHLELEKILE", okusho ukuthi, ngolimi lwezobuchwepheshe kulabo bethu abanenhlanhla yokuthi bafundiswe, futhi ngolimi lwabo kulabo abangazange balithole lelo thuba, kodwa kulokho impilo ibanika ukuhlakanipha. Ngale ndlela, lezi zinguquko ezenzeka ngempela futhi ngokwemvelo enhlalakahleni yethu ngeke zenziwe ihaba.